Ugwu a ma ama na Switzerland Alps | Njem zuru oke
Ugwu a ma ama nke Switzerland Alps
Ezigbo Switzerland | | Switzerland
El Matterhorn Ogologo elu 4478 mita, ma ọ bụ "Z'horu" dị ka Switzerland na-akpọ ya, ọ bụ ugwu kachasị ama na Alps.
Ọ bụ nnukwu ugwu ma nwee mmetụta dị ịtụnanya mgbe ị na-efegharị gburugburu Matterhorn na njegharị helikopta.
Zermatt Ọ bụkwa ebe a na-ewu ewu dị elu nke na-ewu ewu n'oge oyi na ọkọchị n'akụkụ Matterhorn, nke bụ ugwu kachasị ese foto n'ụwa. Obi abụọ adịghị ya na ọ kacha mma mara amara na Switzerland.
Ọzọkwa mma bụ Jungfraujoch. Site n'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ glacier kasịnụ na Europe, dị ka Aletsch. Ihe ọzọ dị mma bụ nyocha nke Sphinx na Ice Palace na-egbu maramara.
Otu n'ime ebe nkiri dị ukwuu nke Switzerland dịkwa nso na obodo mara mma nke Lucerne dị ka Ugwu Rigi, n'etiti Switzerland, ọ bụ njem njem na ezumike ezumike. Na May 21, 1871, ọ bụ ugwu izizi ebe e wuru okporo ụzọ okporo ígwè rute n'elu.
Gbọ oloko ahụ na-ahapụ oge ọ bụla site na obodo Goldau na Vitznau ruo elu nke Rigi. Enwekwara ụgbọ ala panorama na-arụ ọrụ site na obodo Weggis.
Ugwu ọzọ dị larịị mgbe Ugwu Rigi nwere echiche kachasị ama na etiti Switzerland bụ Ugwu Pilatus, nke nwere ụgbọ elu cogwheel kachasị elu n'ụwa. Ihe ngosi site na ihu ugwu bu ihe di egwu, ma obu oge ihu igwe di nma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ugwu a ma ama nke Switzerland Alps
Jiaozi (ravioli nke China)
Ebe ị ga-a drinkụ biya na Stockholm